Inona ireo fomba sasany ho an’ny tandrefana ny olona hihaona afovoany-kilasy-Sinoa Thai zazavavy ho an’ny fifandraisana matotra eo amin’ny Bangkok. Video Mampiaraka
Sinoa vahoaka Thai matetika mijery ambany amin’ny vahiny. Ny fahamarinana dia izay Shinoa Thailandey ny fianakaviana dia ny ankamaroany, upper-class. Noho izany, ireo ankizivavy ny ankamaroany dia mijery ambany amin’ny tandrefana noho ny lafin-javatra samihafa. Loatra ara-politika mba ho tena miresaka tamin’ny forum misokatra hoan’ny daholobe. Ny lamaody ho an’ny fiarahana eo amin’ny Shinoa Thai vavy dia ny lehilahy koreana. Alohan’ny fa ny lamaody dia lehilahy Japoney ary na dia ela lasa izay izany dia Tandrefana. Satria ny vehivavy Thai dia voasariky ny fironana sy ny lamaody dia ho sarotra. Dia tokony handany fotoana ao Lepro.
Ny toro-hevitra dia mba mandehana mandehandeha any amin’ny fivarotana kafe sy ny tena toerana. Miezaha hanomboka ny resadresaka miaraka amin’ny ankizivavy ao amin’ny tontolo izay tsy hametraka»Thai tsindry ara-tsosialy»eo amin’ny zazavavy. Vahoaka Thai dia tena mora mahatsapa ny marika ny tsindry ara-tsosialy fa ianao dia hahita azy mafy mba manadala ankizilahy miaraka amin’ny ankizivavy izay efa nijery sy tsaraina hafa ny vahoaka Thai rehetra. Mba mangina ny toerana tsara indrindra ho an’ny fivoriana. Mampiasa Tinder, Scout na hafa mampiaraka fampiharana izany dia toerana manokana raha any Lepro raha be loatra saro-kenatra atao mivantana, fomba. Satria ny fampiharana dia toerana manokana ianao, dia ho mahazo mifanaraka amin’ny tovovavy ao amin’ny faritra. Aza menatra milaza ny ankizivavy ao amin’ny mombamomba mampiaraka fa mitady ny fifandraisana matotra. Izy ireo dia mankasitraka ny manao ny marina sy ny mety ho mora kokoa ny hanaiky ny mifanena. Ny Amerikana namako iray ny ahy nihaona ny Thailandey-Sinoa vadiny tao amin’ny fivarotana kafe. Izy nahita azy mahaliana sy nandeha niakatra ny miresaka azy. Hafa Thai namako iray izay tena nahita fianarana nahita ny vadiny amin’ny fiarahana amin’ny tranonkala. Izao izy dia nifindra tany ETAZONIA miaina miaraka amin’ny vadiny. Efa nandre momba ny match ny orinasa izay efijery mombamomba ny mpanjifa ary tsy misy azy ireo. Tsy maintsy mandoa saram, manome azy ireo ny tena vaovao sy ny fanantenana alohan’ny izy ireo dia afaka mahita ny lalao ho anao.
Izany dia mety ho fomba iray hafa
Ny vehivavy no tena mafy fifandraisana kolontsaina, ianao no toa tsy mba hanatona tsirairay manokana, indrindra rehefa zara raha fantatra ianareo rehetra avy amin’ny mampiaraka zava-nitranga (raha ny marina, mendrika ny vehivavy amin’ny ankapobeny tsy dia manatrika ny fiarahana hetsika). Ianao dia nahazo ny asa miaraka aminy na dia ampahafantarina azy amin’ny alalan’ny namany akaiky ny karazana manomboka rehetra endriky ny fifandraisana
Ny amin'ny chat Roulette - Chatroulette →